KuFedora bahlela ukwenza ukwahlukana bese bekuqamba kabusha njengeFedora Linux | Kusuka kuLinux
Akungabazeki lAbathuthukisi bokusabalalisa kweFedora banikeze okuningi abazokhuluma ngakho kusukela ngesemester yokugcina yanyakenye nangezinyanga ezintathu eziqale lo nyaka futhi akumele ithathe kancane imizamo abayikhombisile njengoba sekukhishwe izinguquko eziningi ezibalulekile kulokhu kusatshalaliswa kweLinux.
Futhi kulokhu akunjalo Yebo, kukhona okubalulekile okusazokwenzeka ngaphakathi kweFedora futhi kunjalo umholi wephrojekthi uqobo (Matthew Miller) ngubani umemezele ukuthi uthathe isinyathelo sokuhlukanisa umphakathi we-Fedora namagama wokusabalalisa.
Ngisho, ngaphakathi koshintsho ehlongozwayo nguMatthew Miller kucatshangwa ukuthi Kusho ukwehlukana ngakolunye uhlangothi, igama elithi "Fedora" lihlobene kuphela nayo yonke iphrojekthi nomphakathi ohambisanayo, ngenkathi esimweni sokusatshalaliswa kuhlelwe ukubizwa ngeFedora Linux.
Kuyiqiniso ukuthi kwabaningi kungenzeka kungameleli into enkulu kanti enye ingxenye yomphakathi le nhlangano ayiyithandi neze (ngethemba ukuthi lokhu akuholeli ekuhlukaneni ngenxa yokungeneliseki njengoba kwenzekile kokunye ukwabiwa), kepha Lolu shintsho lucabanga ngenhloso yokwenza ukwahlukana maqondana nalokho okwenziwayo nokuthi yini okukhathazayo.
Ngamanye amagama, isizathu soshintsho ngegama kushiwo ukuthi iphrojekthi I-Fedora ayigcini ekusatshalalisweni okukodwa futhi ithuthukisa nendawo yokugcina ye-EPEL ye-RHEL / CentOS, imibhalo, amawebhusayithi kanye namathuluzi ahlukahlukene. Ngakho-ke, uma ngithi uFedora, ngithanda ukubhekisa kuyo yonke iphrojekthi hhayi komunye wemikhiqizo eyenziwayo.
Kuyo umemezele okwenziwe ngumholi wephrojekthi yeFedora Kushiwo ukuthi kucelwa ukushintshwa kwegama kuceliwe kuFedora version 35 lapho izongena khona esikhundleni sepharamitha engu- 'NAME = Fedora' kufayela le- / etc / os-release Nge- 'NAME = »Fedora Linux»'.
Uma ngikhuluma ngeFedora Project, ngisho wena: umphakathi. Ukusatshalaliswa kweLinux esikwenzayo kuhle, kepha umphakathi uyisihluthulelo. Lapho abantu bethi "Fedora" ngaphandle kwesihlungi, ngingathanda ukuthi bacabange nge- "Project Fedora", hhayi amabhithi esiwakhiqizayo. Ngaphezu kwalokho, sakha izinto ezingaphezu kweyodwa: i-EPEL, ngokwesibonelo, ngaphezu kobuciko, imibhalo, amawebhusayithi kanye namathuluzi angaxhumene kakhulu nohlelo uqobo.
Eminyakeni edlule, asenzanga umsebenzi omuhle wokusungula lo mehluko. Manje, masizimisele ngokwengeziwe ngolimi lwethu.
Ngisanda kucela abahleli bephephabhuku iFedora ukuthi baqale ukusebenzisa i- "Fedora Linux" ezindaweni lapho sibhekisa khona ohlelweni lokusebenza. Isibonelo: "Usebenzisa i-mycoolpackage ku-Fedora Linux" esikhundleni sokuthi "Usebenzisa i-mycoolpackage ku-Fedora". Umphathi Wezinhlelo zeFedora uvuselele amashejuli kanye nethempulethi yesiphakamiso soshintsho ukusebenzisa i- "Fedora Linux" lapho kufanele khona.
Ipharamitha "ID = fedora" izohlala ingashintshiwe, okungukuthi, akudingekile ukuguqula imibhalo kanye namabhulokhi anemibandela kumafayela wokucaciswa.
Ngasohlangothini lwezinhlelo ezikhethekile, lokhu kuzoqhubeka nokusatshalaliswa ngaphansi kwamagama amadala, afana neFedora Workstation, iFedora CoreOS neFedora KDE Plasma Desktop.
Kuthiwani ngama-edishini nokunye okuhlukile? Qhubeka usebenzise i- "Fedora Njengoba sesivele senza. Isibonelo: "iFedora Workstation", hhayi i- "Fedora Linux Workstation".
Umqondo wokucacisa iFedora GNU + Linux esikhundleni seFedora Linux awukakutholi ukwesekwa, njengoba amagama angenasidingo enza kube nzima ukuwaqonda futhi yize izingxenye zephrojekthi ye-GNU ziyisixhumanisi esibalulekile kuFedora Linux, ukusatshalaliswa akugcini kubo futhi kufaka namanye amaphakheji amaningi.
Futhi, ukusetshenziswa kwegama elithi "Linux" ekusabalaliseni sekuvele kubambile futhi sekuyigama elamukelwa ngokujwayelekile.
Okokugcina uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho Mayelana nalezi zindaba, ungabheka imininingwane kokuthunyelwe kokuqala kwebhulogi ngumholi wephrojekthi yeFedora Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » KuFedora bahlela ukwenza ukwahlukanisa bese bekuqamba kabusha njengeFedora Linux